आजबाट लागू भयो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक प्रमापत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था आइबारदेखि नै लागू भएको छ । मन्त्रालयले ऋणमा दिइने ब्याज
विधार्थी उपत्यका कार्य समिति द्धारा “सुचनाको हक सम्बन्धि एक दिने अभिमुखीकरण तालिम” सम्पन !
काठमाणडौ, ३० भदौ । नेपाल कुशवाहा विधार्थी कल्याण समाज उपत्यका कार्य समिति द्धारा आयोजित “सुचनाको हक सम्बन्धि एक दिने अभिमुखीकरण तालिम” सफल रुपमा सम्पन भएको छ । जुन कार्यक्रम ICA Training
TU एम.एड.को प्रश्नपत्र आउट गर्ने भट्टराईले दिए राजीनामा
काडमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको स्नातक तह पहिलो सेमेस्टरको प्रश्नपत्र आउट गर्ने प्राध्यापक होमनाथ भट्टराईले विभागीय प्रमुखबाट राजीनामा दिएका छन् । एमएड साइकोलोजी र शिक्षाको आधार विषयको प्रश्नपत्र आउट गरेका
समाजसेवी रेणु यादवको पहलमा सिरहामा क्यान्सर अस्पताल खुल्दैं
सिरहा । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले सिरहामा शाखा खोल्न पहल सुरु गरेका छन् । सिरहाका चर्चित समाजसेवी रेणु यादवको प्रत्यक्ष पहलमा त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ । समाजसेवी यादवको
काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरे सुविधै सुविधा पाइने भएको छ । मानव सुचकांकको दृष्टीकोणले पछाडी परेका र अन्य विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विभिन्न सुविधासहित निशुल्क शिक्षा
देशैभर ५० हजार शिक्षक आवश्यक, कहिले होला पूर्ति ?
काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित कार्यदलले देशभर ५० हजार शिक्षक आवश्यक रहको तथ्यांक बनाएको छ । सरकारद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कायदलले तयार पारेको तथ्यांकमा करिब ५० हजार शिक्षक अपुग
ड्रिम डेस्टिनी अस्ट्रेलिया, अमेरिका शैक्षिक मेला हुने
काठमाडौं, २२ साउन । उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक सोच बनाईरहेका प्लस टु तथा ब्याचलर गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ड्रिम डेस्टिनी एजुकेशन फाउण्डेसनको आयोजनामा काठमाण्डौमा ड्रिम डेस्टिनी अस्ट्रेलिया, अमेरिका एजुकेशन फेयर
चीनकाे सहयाेगमा बन्ने एेतिहासिक “|दरबार हाइस्कुल” भवनको शिलान्यास
काठमाडौँ, १८ साउन । नेपालको आधुनिक शिक्षाको अग्रणी शैक्षिक संस्था दरबार हाइस्कूल (भानु माध्यामिक विद्यालय) भवनको भूकम्प गएको तीन वर्षछि शिलान्यास भएको छ ।विसं २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले १६५ वर्ष पुरानो
माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्कः शिक्षामन्त्री
काठमान्डौँ, १६ साउन । सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक र व्यवसायिक
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने मिती तय
काठमान्डौँ , १५ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा भोलि सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आज सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि बोर्डले भोलिमात्रै सार्वजनिक गर्न लागेको हो । गएको
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने
काठमान्डौँ , १३ साउन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नहुनेमा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले जोड दिएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ